21 IINDAWO EZININZI EZIBUHLUNGU ZOKUFUMANA ITATTOO: APHO IITATTOOS ZIBUHLUNGU KAKHULU (2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos 21 Iindawo ezininzi eziBuhlungu zokufumana iTattoo
Ukuba uyoyika iintlungu zetattoo kwaye unomdla malunga neyona ndawo ibuhlungu yokufumana itattoo, siye saqulunqa uluhlu lweyona ndawo imbi kakhulu yokufumana itattoo. IiTattoos ziyaziwa ngokuba buhlungu, kodwa amanye amabala emzimbeni anokwenzakalisa ngaphezu kwamanye. Nangona wonke umntu enamanqanaba ahlukeneyo okunyamezelwa kweentlungu, kukho iindawo eziqhelekileyo ezibuthathaka apho ukufumana umvambo kuya kuba mbi ngakumbi.
Kwaye ngelixa ezinye iintlungu ezinomvambo zingenakuphepheka, ukwazi apho umzimba wakho inaliti iya kukhathaza kakhulu kwaye ukhethe indawo elungileyo ye tattoo yakho kunokunceda ukunciphisa le ntlungu kakhulu. Nazi iindawo ezincinci kunye neyona nto ibuhlungu yokufumana itattoo.
enkulu 3 ukuvumisa ngeenkwenkwezi
1Itshathi yeentlungu zeTattoo
MbiniUninzi lweendawo ezibuhlungu zeTattoo
3Iindawo ezinobuncinci Ukufumana iTattoo
Itshathi yeentlungu zeTattoo
Iindawo zentlungu yeTattoo zifunyanwa zijikeleze iindawo apho amadoda nabafazi banesikhumba esibhityileyo kunye neziphelo zemithambo ezibekwe ngqo ngaphezulu kwamathambo. Iindawo ezimbi kakhulu zibandakanya iimbambo, ingqiniba, umqolo, idolo, ikhwapha, unyawo, iqatha, isternum, ibicep yangaphakathi, intamo, umqala, isandla, umnwe, ikhola, intloko kunye nethanga langaphakathi. Ukuba ufumana i-tattoo yakho yokuqala, sicebisa indawo yenyama enje ingalo , ephezulu umva , igxalaba, ingalo , okanye isifuba .
Jonga le tshathi yeentlungu ukuze ubone umzobo womzimba wakho kunye neyona ndawo incinci kwaye ibuhlungu. Inqanaba leentlungu liya kukunika umbono wokuba lingakanani inani lomzimba elibuhlungu xa kuthelekiswa nezinye iindawo.
Khawukhumbule nje ukuba intlungu ye tattoo ixhomekeke kakhulu. Kuba amanqanaba entlungu athe ngqo kumadoda nabafazi ngabanye, kwaye anokuchaphazeleka kukonzakala, uqhaqho, inkcazo yemisipha, ubungakanani kunye nokunyamezelana ngokubanzi, kubalulekile ukuba ulinganise ukuba itatoo iya kubi kangakanani ngokusekwe kumava akho angaphambili kunye nentlungu kunye nokukhathazeka.
Uninzi lweendawo ezibuhlungu zeTattoo
Iimbambo yenye yezona ndawo zibuhlungu kakhulu ukufumana itattoo kuba ungenalo ulusu, izihlunu okanye amanqatha amaninzi kuloo ndawo. Kwaye ukubuyiswa kwenaliti kwintambo yakho kunye namathambo kunokubangela ukungonwabi okuninzi.
Ngapha koko, ubambo lwakho luhamba ngumoya ngamnye, lubangela ukuba iintlungu zibe namandla ngenxa yentshukumo eqhubekayo. Iintlungu ze-Rib tattoo zinokuba mandundu ngakumbi ukuba iimbambo zakho zibalulekile okanye unamafutha amancinci esiswini. Ngokubanzi, uninzi lwabantu luxele ukuba iitattoos zembambo zenzakele xa kuthelekiswa nezinye iindawo ezibuthathaka.
Intlungu ye-elbow tattoo ifana neembambo. Ulusu lwengqiniba yakho ibhityile ngendlela emangalisayo, luhleli ngqo phezu kwethambo, kwaye liza neziphelo ezibuthathaka zemithambo-luvo eziza kudubula iintlungu phantsi kwengalo yakho ngochukumiso olungelulo. Umcimbi uyanda kuba akukho mafutha okanye intlala-mnyama ukuba ibe ngumqamelo. Kwaye xa ukungcangcazela kwenaliti ye tattoo kudlula phezu kwethambo, kubangela ukungaphatheki kakuhle okubukhali kufana naxa ubetha ithambo lakho elihlekisayo. Ingqiniba yangaphakathi yindawo ebuthathaka kakhulu.
Ngelixa uninzi lwangasemva inokuba yenye yezona ndawo zincinci zibuhlungu zokufumana itattoo, umqolo ubuthathaka ngokumangalisayo. Iitattoo zomqolo zibuhlungu kuba amathambo asondele kakhulu kulusu. Nangona kunjalo, yintoni ebangela ukuba iintlungu zomvambo womqolo zibe mbi ziimisipha ezihamba zisihla ngomqolo wonke. Idityaniswe nokuhamba kwenaliti ye tattoo ngqo kwi-vertebrae, umqolo wonyusa inqanaba lentlungu.
Nokuba ufumana umvambo ngaphambili kwedolo okanye ngasemva, iintlungu zedolo tattoo zinokuba krakra. Ngaphambili, imvakalelo iyafana naleyo ye-elbow tattoo, njengoko ulusu lucekecekile kwaye lulungile ngaphezulu kwethambo. Nokuba ukhetha indawo engaphandle okanye yangaphakathi ye-kneecap, amava aya kuba buhlungu. Ngasemva kwedolo, ulusu luthambile kwaye luzele yimithambo-luvo, luyenza indawo ethe-ethe. Ukongeza kwintlungu, idolo Iitattoo zithatha ixesha elide ukuphilisa ngenxa yokuhamba rhoqo.
Uninzi luye lathi ikhwapha yeyona ndawo ibuhlungu yokufumana umvambo. Njengomqolo wedolo, le yindawo ethambileyo kunye novakalelo oluninzi olunokuphela kwemithambo-luvo kunye namadlala. Ngelixa ingalo eseleyo iyinyama enesikhumba esomeleleyo, iintlungu ze-armpit zetattoo zibaxekile. Ukuba ulungile, ke le ndawo ye tattoo ayiyiyo kwaye inaliti iya kwenza ukuba kunganyamezeleki ukuya kwiseshoni.
Iitattoo zeenyawo ziyaziwa ngokuba ziindawo ezimbi. Umphezulu wonyawo unovakalelo ngakumbi kuba kukho amaqela amakhulu emithambo-luvo enokubangela iintlungu zokudubula ngexesha leseshoni yethambo. Ngapha koko, ulusu oluphezulu kunyawo luxhomekeke ngendlela emangalisayo, oko kuthetha ukuba intshukumo yenaliti iya kungcangcazela ngqo kwithambo lakho.
Intlungu ye-ankle ye-ankle kuthiwa inamandla kakhulu. Ngolusu oluncinci kakhulu kunye nethambo leqatha apha ngezantsi, ii-ankle tattoos zibuhlungu kakhulu. Njengamanye amabala e-tattoo, ukungcangcazela okusuka kwinaliti kuyaphuma kwithambo leqatha, elinokuthi linyuke nethambo lakho. Ukuba wakha waqhayisa iqatha okanye ingqiniba, cinga ukuba ungonwabanga kangangeeyure ngelixa uyinki.
Ubuhlungu kwi-sternum yakho kunokwenzeka ukuba ufumana itattoo epheleleyo yesifuba. Iintlungu ze-Sternum tattoo zivela kulusu olucekeceke kakhulu kunye nethambo elingqingqwa elingaphantsi komphezulu. Ukuba ulibhityile okanye ubhonyile, indawo inokuba novakalelo olugqithisileyo kumvambo. Iitattoos zesifuba kubafazi kunokuba buhlungu ngakumbi kwingono nakwindawo ezibuthathaka. Njenge-tattoo yethambo, ukuphefumla kunokunyusa amanqanaba entlungu njengoko imiphunga ikufuphi. Ngelixa iintlungu zetattoo esifubeni azimbi kangako, lumkela ukwenza umvambo kwikhola, isternum kunye nengono.
Intlungu yangaphakathi ye-bicep ye tattoo iyahluka ngokobuninzi bemisipha onayo. Kodwa ulusu kwingalo yakho yangaphakathi luthambile kwaye izihlunu zakho zinokufumana ithenda emva kokubethelwa ngenaliti kangangeeyure, ngaloo ndlela zonyusa amanqanaba entlungu. An ngaphakathi kwi-bicep tattoo Kwakhona kuthatha ixesha elide ukuphilisa kunezinye iindawo ze tattoo. Ngokubanzi, iintlungu zetattoo ziyanyamezeleka, ziyenza indawo eyaziwayo kubafana namantombazana.
Iitattoo zeentamo zinokuba buhlungu ngendlela engathethekiyo, kuba kukho imithambo-luvo emikhulu ezantsi nasemacaleni entamo anokucaphukisa inkqubo ye tattoo. Ubuhlungu bunokude buphume kwezi luvo kumqolo nasemagxeni akho. Kukwaphawuleka ukukhankanya ukuba abanye abantu banokuphendula gwenxa kuxinzelelo oluzinzileyo entanyeni yabo. Ukuba unezinga eliphantsi lokunyamezeleka kwentlungu, itattoo yentamo isenokungabi yeyakho.
Iitattoo zomqala zinokuba yimpambano yokunyamezela. Ngeziphelo ezibalulekileyo zemithambo-luvo apha kunye nolusu olucekeceke kakhulu, iintlungu zomqala womvambo zinokukhathaza ngaphezu kokuba ubulindele. Njengendawo ebuthathaka, sicebisa umva we tattoo entanyeni endaweni yoko.
Izandla zeetattoo zithandwa ngendlela emangalisayo, kodwa ziyabulala ngokuqinisekileyo. Iintlungu zetattoo yesandla zivela kwinto yokuba ulusu lucekeceke kwaye lubuthathaka, inaliti iya kubetha ithambo kwiseshoni yonke, kwaye kukho izihlunu kunye nemisipha emininzi yokwenza ibuhlungu ngakumbi. Ngelixa umphezulu wesandla umbi kakhulu, intende yindawo ebuhlungu ngakumbi njengoko ineziphelo ezininzi zemithambo-luvo ezibangela i-spasms xa ibhalwe tattoo.
Iitattoo zeminwe nazo zibuhlungu ngenxa yokubhitya kolusu kunye nokusondela kwethambo. Ngaphandle koko, kunzima kubazobi be tattoo ukufumana imigca ethe tye, necocekileyo kumgangatho omncinci kwaye ojijekileyo, usenza ukuba kube nzima nokuba ngumvambo wesandla. Ngaphandle kokunciphisa ukungonwabi, iintlungu zomnwe we tattoo zinokuziva zibuhlungu.
Iitatto zesandla zibuhlungu kakhulu kwaye ziphezulu kakhulu kwinqanaba leentlungu. Ngelixa i-tattoo ephezulu yesandla inokunyamezeleka kwabanye, iintlungu zetattoo yesihlahla zinokugqithisa ngaphakathi. Ingaphakathi lesihlahla linamafutha amancinci kwaye ngenxa yoko isikhumba esibhityileyo, sikhatshwa ziziphelo ezininzi zemithambo-luvo kunye nemithambo.
I-collarbone icace gca ukuba inamathambo ngesikhumba esibhityileyo, esenza ukuba ibe yindawo ebuhlungu ye tattoo. Akukho kuncipha komqamelo, oko kuthetha ukuba uya kuziva konke ukungcangcazela kwenaliti njengoko ibamba ulusu lwakho kwaye ibetha ithambo.
Intloko yeentlungu zetattoo zinokuba nzima kakhulu, kuba akukho mngxunya mkhulu phakathi kolusu kunye nethambo. Iitattoo zentloko zinokwahluka kwiitattoo zobuso bendabuko ukuya kubuso obungapheliyo, kwaye iintlungu ziyahluka ngokusekwe kwinto oyenzayo, ubungakanani bomsebenzi wobugcisa, kunye nendawo yentloko okanye ubuso obukhethileyo kwi-inki. Yintoni eyenza ukuba i-tattoo yentloko ibuhlungu nangakumbi yimeko yengqondo yokuva ukungcangcazela kwentloko yakho, enokubangela nokuba ibe yintloko kangangeeyure.
Iitattoo zomlomo ziyaziwa ukuba zibuhlungu ngenxa yobuninzi bemithambo-luvo emilebeni. Lo mmandla uqhele ukopha nokudumba ngexesha nasemva kweseshoni ye tattoo, ke amadoda nabafazi kufuneka baqhubeke ngononophelo. Ngaphandle kwezizathu ezicacileyo, iintlungu zomlomo we-tattoo zinokucacisa ukuba kutheni uninzi lwabantu lukhetha uyilo oluncinci nolulula apho.
Iitattoo zeendlebe nazo zibuhlungu, kuba akukho mngxunya ukufunxa iintlungu. Nokuba ufumana umvambo emva kwendlebe okanye ucinga i-inki ngaphakathi, umbono wokuba intyatyambo yakho igqojozwe ngokuphindaphindiweyo kwiseshoni ye tattoo yonke inokubonakala ngathi ayihambelani.
Iintlungu zethambo zethanga zikhohlisa ngokukhohlisa. Ngelixa ithanga langaphakathi linenyama kunye nezixa ezilungileyo zezihlunu kunye namafutha, kuyamangalisa ukuba lelinye lawona mabala mabi ukufumana itattoo. Ukuthamba kunye nokuthamba, iitattoos ngaphakathi nangaphandle kwethanga nazo zinokuthatha ixesha lokuphilisa ngenxa yokurabha rhoqo iimpahla zakho kunye nokunye umlenze .
Itattoo yamathole inokubethwa okanye iphoswe malunga nokuba ingakulimaza kangakanani. Kude kwithambo le-shin nakwicala lesisu sakho sethole kunokuba yindawo entle ye tattoo. Ukuphela kwemithambo-luvo kunye nolusu olucekeceke kunokuba luncedo ekunciphiseni iintlungu. Kodwa umva wethole unokuba ngowona mbi kakhulu. Ithole linobuntununtunu ngesikhumba sethenda, kwaye iintlungu zetattoo zinokubonakala ngokuxhomekeka kubungakanani yoyilo lwakho, ngakumbi ukuba lisukela ngasemva kwedolo lakho liye ezantsi eqaqadeni.
Njengethole, ii-shin tattoos azonwabisi. Ulusu lucekeceke kakhulu kwaye nawuphi na umzobo uya kuhlala phezu kwethambo lakho, ubangele ukungcangcazela okubuhlungu kwenaliti ukudubula umlenze wakho.
Iindawo ezinobuncinci Ukufumana iTattoo
Ezona ndawo zidumileyo zetattoo yamadoda ngokubanzi ziba zezona ndawo zincinci zokufumana inki. Umzekelo, uninzi lwabantu luxela ukuba umva, ingalo, igxalaba, isifuba kunye neentlungu zetattoo yengalo ziphakathi kwamalungu omzimba anyamezelayo. Inentabalala yenyama enamafutha ukufunxa ukungcangcazela kunye nokunciphisa ukungonwabi, iiTattoo zamadoda kwezi ndawo zenzakalisa kancinci.
Ngokubanzi, eyona ndawo ifanelekileyo yokufumana tattoo engazukukhathaza ligxalaba. Ngemithambo-luvo engenabuzaza, ulusu olungqindilili, kunye nezihlunu ezingaphezulu zokuthomalalisa iintlungu, igxalaba yeyona ndawo ibuhlungu yeetattoos.
igama leenwele zamadoda
Ingqaqambo yomvambo ophantsi iphantsi ngokuthelekiswa nezinye iindawo emzimbeni wakho. Ngolusu olomeleleyo, ukupheliswa kwemithambo-luvo okungaphantsi, kunye nezihlunu kunye namafutha ukunciphisa ukubuyela kwakhona kwentshukumo yenaliti, iitattoo zengalo azilimazi kakubi.
Kubalulekile ukugcina ukunyamezeleka kweentlungu engqondweni xa ukhetha indawo ye tattoo yakho elandelayo. Awungekhe ufune ukuhlala phantsi kwiseshoni, ungabinakho ukuphatha iintlungu kwaye ushiye i-inki egqityiweyo. Wazi umzimba nengqondo yakho, kwaye uthathe izigqibo ngokufanelekileyo.
iitattoos zamadoda engalweni
umva we tattoo forearm
isitayile seenwele kumfo
isixhobo sokubala esinyukayo
luthini uphawu lwakho olunyukayo